Turkiga Oo Weeraraya Waqooyiga Dalka Suuriya | Himilo Media Group
Turkiga Oo Weeraraya Waqooyiga Dalka Suuriya
Ankara, 10 Oct, 2019 (Himilo)-Ciidammada Dalka Turkiga ayaa waxay bilaabeen duulaan ay ku qaadeen Waqooyi bari Suuriya taasi oo horseedaysa in iska hor imaad toos ahi uu dhex maro xoogaga kurdiyiinta ee gacan saarka la leh Mareykanka.
Madaxwaynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in howlgalkan uu yahay, “Mid lagu abuurayo goob ammaan ah oo laga nadiifiyey xoogaga kurdiyiinta isla markaana ay goobtani noqoto mid marti galisa Qaxoontiga Reer Suuriya.
Duulaankan ayey sheegeen kooxda Kurdiyiinta in uu sababi doono khasaaro soo gaadha dadka rayidka ah.
Ciidammada dhulka ee Turkiga ayaa sidoo kale ilaalo weyn ka haya xudduuda Suuriya iyo Turkiga.
Mareykanka ayaa si lama filaan ah ciidammadiisa uga saaraya xadka u dhexeeya waqooyiga-bari Suuriya iyo Turkiga, arrintaa oo shaki gelinaysa waxa uu noqonayo masiirka dhulkaasi.
Tallaabadaasi Mareykanka ayaa u ogolaaneysa millatariga dalka Turkiga in halkaasi uu billaabo hawlgal ka dhan ah isbaheysiga malleeshiyaadka Kurdiyiinta ee ay reer galbeedku ku garabsanayeen dagaalka ka dhanka ah kooxda la baxday Dawladda Islaamka ee Daacish.
Turkiga wuxuu u arkaa isbaheysigani ay hoggaamiyaan malleeshiyadkani Kurdiyiinta koox argagixiso ah, waxaanu sheegayaa in ay tahay qeyb ka mid ah kooxda fallaagada Kurdiyiinta ee ka dagaalka kula jirta dowladda Turkiga.
Mas’uuliyiinta dalkaasi Turkiga ayaa doonaya in xudduudda Suuriya ay ka sameeyaan dhul gaadhaya 32km oo ah ‘Aag nabdoon’ isla markaana ay ka nadiifinayaan aagaasi dagaalyahannada Kurdiyiinta. Waxaa kale oo ay rejaynayaan in dhulkaasi oo ah gudaha dalka Suuriya ay dib u dejin ugu sameeyaan ilaa laba milyan oo qaxoonti Suuriyaan ah oo hada ku nool gudaha dalka Turkiga.
Isbaheysigani ay Kurdiyiinta hoggaamiyaan ayaa sheegaya in ay dhulkooga difaacan doonaan isla markaana ay u arkaan in Mareykanku uu “Isaga tegayo aaggaasi si uu ugu beddalo aag dagaal”, dhulkaasi uu halis ugu jiro in kooxda Daacish ay mar kale ka hana qaado.
Turkiga ayaa wacad ku maray in malleeshiyaadka kurdiyiinta Suuriya ee YPG uu ka fogeyn doono xudduudda uu la leeyahay dalka Suuriya.